Muuri News Network » Guddoomiyihii degmada Xamar weyne oo shaqo joojin lagu sameeyay, lana xiray
Guddoomiyihii degmada Xamar weyne oo shaqo joojin lagu sameeyay, lana xiray
Guddoomiyihii degmada Xamar Weyne Cumar Shariif Maye (Cumar Jeeg) ayaa shaqo joojin lagu sameeyay kaddib wareegto ka soo baxday Kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Guddoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur.
Wareegtada ka soo baxday Kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Xuseen ayaa lagu sheegay in Cumar Shariif Jeeg uu si bareer ah uga been sheegay Ciidamada Booliska, kuna tilmaamay in amniga dalka lagu aamini karin, ayna keenaan qaraxyada.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu ku tilmaamay Maamulka Gobolka Banaadir meel uu ka jiro musuq maasuq, sidoo kale Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre ay tahay Xukuumadda ugu musuq maasuqa badan.
Waxaa qoraalka lagu sheegay in si KMG uu xilka Guddoomiyaha degmada Xamar weyne u sii wadayo Guddoomiye kuxigeenka Axmed Maxamed Iidow.
Dhinaca kale Ciidamo ka tirsan Booliska ayaa xabsiga u taxaabay Guddoomiyihii Xamar Weyne, kaddib markii ay soo baxday wareegtada shaqada looga joojiyay, waxaa wararku sheegayaan in lagu xiray Xarunta dambi baarista ee CID.